Unoda Kuva Shamwari yaMwari Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zande Zulu
“Kuva shamwari yepedyo yaMwari kunoita kuti usava nechekutyira, ugutsikane uye ugadzikane. Kunoita kuti unzwe sokuti Mwari ari kugara achiita kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka.”—CHRISTOPHER, MURUME WECHIDIKI WEKUGHANA.
“Mwari anoona kutambura kwese kwaunenge uchiita, uye anonyatsoratidza kuti anokuda, achikubatsira kupfuura zvaungafunga.”—HANNAH ANE MAKORE 13 WEKUALASKA, U.S.A.
“Hapana chinokosha uye chinozorodza kupfuura kuziva kuti uri shamwari yaMwari yepedyo!”—MUKADZI ANONZI GINA WEKUJAMAICA ANE MAKORE EKUMA40.
Christopher, Hannah, naGina havasivo voga vanonzwa saizvozvo. Vanhu vakawanda munyika yose vane chokwadi chekuti Mwari anovaona seshamwari dzake. Ko iwe? Unoonawo sekuti Mwari ari pedyo newe here? Unoda here kutanga ushamwari naMwari kana kuti kutova neushamwari hwakasimba naye? Pamwe unganetseka kuti zvinokwanisika here kuti munhu wenyama ave shamwari yaMwari Wemasimbaose? Kana zvichikwanisika, ungazviita sei?
Bhaibheri rinoratidza kuti zvinokwanisika kuti munhu ave shamwari yaMwari yepedyo. Rinoti Mwari akadana Abrahamu, muHebheru kuti “shamwari yangu.” (Isaya 41:8) Onawo zvauri kukumbirwa neushamwari kuti uite pana Jakobho 4:8 panoti: ‘Swedera pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo newe.’ Saka zviri pachena kuti munhu anogona kuva pedyo naMwari, kana kuti kuva shamwari yake. Asi sezvo Mwari asingaoneki, ungaswedera sei pedyo naye, wova shamwari yake?
Kuti tipindure mubvunzo uyu, funga nezvekukura kunoita ushamwari hwevanhu. Vanowanzotanga nekuzivana mazita. Pavanoramba vachikurukura zvavanofunga, ushamwari hwavo hunokura. Uyewo pavanoramba vachiitirana zvakanaka, ushamwari hwavo hunosimba. Tingati izvi ndizvowo zvinoitika pakuva neushamwari naMwari. Ngationei kuti zvakafanana papi.
Unoziva Zita raMwari Uye Unorishandisa Here?
Mwari anoita kuti umuzive achishandisa Bhaibheri paanoti, “Ndini Jehovha. Ndiro zita rangu.”